पोर्टलको बारेमा - Flood Resilience Portal
You are here: गृहपृष्ठ हाम्रो बारेमा पोर्टलको बारेमा
बाढी उत्थानशील पोर्टल, नेपाल जुरिच बाढी उत्थानशिल कार्यक्रमको एक उपलब्धि हो। यसको मुख्य उद्येश्य बाढी न्यूनीकरणका प्रविधि साथै बाढी उत्थानशीलता सम्बन्धि ज्ञानहरु प्राप्त गर्न सकिने थलोको रुपमा विकास गर्नु हो।
बाढी उत्थानशील पोर्टलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा हाल विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र जानकारीहरुको कमी नभएपनि स्तरीय र संगठित ज्ञानको अभाव भएको पाइयो । तसर्थ, आवश्यकता अनुसार बाढी सम्बन्धि ज्ञान र जानकारीहरु संगठित गरी कार्यान्वयनकर्तासम्म पुर्याउन बाढी उत्थानशील पोर्टल प्रयासरत छ।
यस Nepali Flood Resilience Portal मा नेपालमा बाढी जोखिम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा भएका नवीनतम प्रयासहरु, मौसम पुर्वानुमान, भविष्यवाणी आदिलाई एकीकृत गर्ने योजना रहेको छ । बाढी जोखिम व्यवस्थापनमा Nepali Flood Resilience Portal महत्त्वपुर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
कुनै प्रतिक्रिया,जिज्ञासा अथवा सुझाव भएमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
अन्य जानकारीका लागी कृपया हाम्रो ई-समाचारपत्र साइन अप गर्नुहोस् ।
जुरिक बाढी उत्थानशील कार्यक्रम
हाम्रा पछिल्ला सामग्रीहरु, प्रकाशनहरु तथा कार्यक्रमहरुको बारेमा थाहा पाउनुहोस्
© सर्वाधिकार 2019. जुरिच बाढी उत्थानशील कार्यक्रममा सुरक्षित.
स्मार्ट सोलुसन द्वारा निर्माण गरिएको